जीवनलाई जोखिममा राखेर जनतालाई सेवा दिईरहेको छौं - Wnepal.com
विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपाल त्रसित बनाएको छ । यही चैत्र ११ गतेदेखि १८ गतेसम्मका लागि सरकारले देशलाई नै लक डाउन गरेको छ । लक डाउनका कारण कुनै पनि व्यक्ति सरकारको अनुमति विना घर बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था छैन ।
यस्तो अवस्थामा पनि नेपालका विकास बैंकहरुले सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन दिएका बैंकहरुले डिजिटल कारोबार गर्न नसक्ने ग्राहकलाई कारोबार सुचार गर्न सिमित शाखाहरु खोलेर सेवा दिइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा विकास बैंक खोलेर सेवा दिन के कस्ता कठिनाईहरु भोग्नु परेको छ ।
बैंक मात्रै खुलेका छन् कि कारोबार पनि भइरहेको छ । बैंकका कर्मचारीहरुको कस्तो सुरक्षा विधि अपनाइएको छ र नेपालका विकास बैंकहरुले कसरी सेवा दिइरहेका छन् भनेर जानकारी दिन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसियनका अध्यक्ष एवं गरिमा विकास बैंकका सीइओ गोबिन्द प्रसाद ढकालसंग भूपेन्द्र आचार्यले गरेको कुराकानीः–
० यो बिसम परिस्थितिमा विकाश बैंकहरुको वर्तमान अवस्था कस्तो छ अध्यक्षज्यू ?
तपाई हामीलाई थाहा नै छ कोरोना भाईरसको आक्रमणबाट विश्व नै त्रसित छ । हजारौले ज्यान गुमाएका छन् । लाखौं बिरामी छन् । नेपाल अहिले लकडाउन छ । यो विशम परिस्थितिमा विकास बैंकहरुले सेवा दिइरहेको अवस्था छ ।
तर, हामीलाई सरकार स्थानीय निकाय र राष्ट्र बैंकबीच फरक फरक कुरा आउँदा केही असहज भने पक्कै भएको छ । आफै सर्तक भएर सेवा दिनु पर्ने बेला छ ।
हामी ग्राहकहरुलाई पैसा झिक्न नपाएर औषधी र खाद्यान्न किन्न नपाइने अवस्था पटक्कै आउन दिने छैनौ । जीवनलाई जोखिममा राखेर जनतालाई सेवा दिईरहेको छौं ।
० राहतको प्याकेज ग्राहकहरुलाई दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । तपाईहरुको तयारी चाही के छ नि ?
हामीले ग्राहकहरुलाई दिनुपर्ने सेवा केही शाखाबाट दिएको अवस्था छ । एटिएम हाम्रा चौविसै घण्टा खुल्ला छन् ।
कुनै शुल्क हामीले लिदैनौ । अर्को कुरा के छ भने राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन अनुसार ग्राहकहरुलाई चैत्रसम्म कर्जाको साँवा ब्याज हाल्न छुट छ । कुनै शुल्क हामी लिदैनौ । बैंक भनेको ग्राहकमुखी सेवा हो । ग्राहकलाई नगद चाहिए हामी दिन तयार छौं ।
० सरकारले कोरोना भाइरस बिरुद्ध लड्न स्थापना गरेको कोषमा विकास बैंकहरुको छाता संस्था डेभलमपेन्ट बैंकर्स एसोशियसनले कस्तो सहयोग गरेको छ त ?
कुरा चलिरहेको छ । हाम्रो संस्थाको बैंठक बसेको छैन । हामी एउटा निर्णयमा पुग्ने नै छौं । आ–आफ्ना बैंकबाट पनि दिने हो कि भन्ने पक्षमा पनि छौं । यो बेला सबै नेपाली एक भएर लाग्नु पर्दछ । सरकारलाई हाम्रो साथ सधै रहने नै छ ।
आउँदो आर्थिक वर्षको सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट निकासा गरेर भए पनि केही दिने पक्षमा हामी छौं । खास गरि पर्यटन व्यवसायलाई ठूलो असर परेको छ । यसका लागि पनि केही कार्यक्रम सरकारले ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।
० विकास बैंकहरुका एटिएममा पैसा नभएको र केही साँझ नर्पदै बन्द गरिएको गुनासा भएको छन् नि ?
यो झुट हो । हाम्रा एटिएममा प्रसस्त पैसा छ । हामीले पाएका पासहरु दिएर एटिएममा कर्मचारीले पैसा हाल्नु भएको अवस्था छ । एटिएम चौविसै घण्टा खुल्ला नै छन् र कुनै पनि बैंकको कार्ड प्रयोग गरेपनि हामी शुल्क लिदैनौ ढुक्क भए हुन्छ ।
० कर्जाको साँवा व्याज मिनाहा बारे के गर्ने सोच्नु भएको छ त ?
मैले अगाडी नै भनिसके चैत्र मसान्त भरी छुट छ । हामीले फोन गरेका छैनौ । राष्ट्रिय समस्या आएको छ । कोरोना भाइरसले देश लकडाउनमा छ यो हामीले बुझेका छौं । हामी पनि यही समाजका मान्छे हौ । हामी सहयोग पक्कै गर्दछौं ।
० देश लकडाउन भएको अवस्थामा खुलेका बैंकका शाखामा काम गर्ने कर्मचारीहरुको स्वास्थ अवस्थाबारे चाहि के सोच्नु भएके छ । अध्यक्ष ज्यू ?
महत्वपूर्ण प्रश्न सोध्नु भयो । कर्मचारी हाम्रा सम्पत्ती हुन् । सम्पत्तीको रक्षा गर्नु हाम्रो पहिलो दायित्व हो । हामीले प्रस्टै भनेका छौं । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेकै कर्मचारी साथीहरुको सुरक्षा नै हो ।
त्यसकारण सेनिटाइजर, माक्स र पञ्जाको पर्याप्त व्यवस्था गरेका छौं । ज्वरो नाप्ने मेसिनको व्यवस्था गरेका छौं । ज्वरो आएका ग्राहकहरुलाई बैंक प्रवेश निषेध छ । केही टाढाबाटै कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ नि ।
० कोरोनाको कारण लकडाउन लम्बिने देखिन्छ । यसको तयारी चाही कस्तो छ त ?
यो सक्रमणसंग आज संसारका कुनै पनि देशहरुले पूर्व तयारी गरेको थिएनन् । हामी भन्दा धेरै शक्तिशाली राष्ट्र आज रोहीरहेको छ । यसले ठूले मात्रामा अर्थतन्त्रलाई हानेको छ । त्यसकारण हामी नेपालीले पाठ सिक्दै पूर्व तयारी गर्नु पर्ने अवस्था छ । त्यो हामी गर्दछौं ।
० कोरोना भाइरसका कारण मुलुकको वित्तिय अवस्थालाई कस्तो असर पर्ने देख्नु भएको छ ?
महत्वपूर्ण प्रश्न सोध्नु भयो । हामी मात्रै होइन कोरोना भाइरसका काराण विश्व अर्थतन्त्रनै तहसनहस भएको छ । यसमा हामी पनि छुटेका पक्कै छैनौ । असर पर्ने संकेत देखा परेका छन् । १÷२ महिना भयो भने त फरक नपर्ला तर लामो समय यस्तै भयो भने हामीलाई तग्रिन निक्कै गाह्रो हुने अवस्था पक्कै आउने देखिन्छ ।
० अन्यमा के छ त ?
हामी विकास बैंकहरुले सेवा दिने कुरामा पटक्कै कन्जुसी गरेका छैनौ । ग्राहकमुखी सेवा दिने पक्षमा नै छौं । हामीले फोन नम्बरहरु दिएका छौं । सम्पर्क गरेर नगद लिन सकिन्छ । एटिएम खुल्ला छन् । स्वास्थ रहनुहोस् । घरबाट बाहिर ननिस्कनुहोस् । विकास बैंकहरु ग्राहकमुखी सेवा दिन प्रतिबद्ध छन् ।